Shirka Brussels oo maanta la soo gabagabeynayo iyo magacyada madaxda.... - Caasimada Online
Home Warar Shirka Brussels oo maanta la soo gabagabeynayo iyo magacyada madaxda….
Shirka Brussels oo maanta la soo gabagabeynayo iyo magacyada madaxda….
Brussels (Caasimadda Online) – Shirka Brussels ayaa maalintii labaad galay, iyadoo lagu wado in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro war murtiyeed looga hadlayo dhinacyo badan oo quseeya mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliya sanadaha soo socda.
Wajiga labaad ee shirka ayaa maanta noqonaya qeybta madaxda caalamka, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu ku soo biiri doono.
Qeybtii koowaad ee shirka ayaa waxaa shalay shir guddoomiyay Kuxigeenka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey iyo Agaasime ka socda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sweden.
Khudbadihii shalay looga hadlay shirka ayaa waxaa si aad ah diiradda loogu saari arrimaha ammaanka, siyaasada, doorashooyinka sanadka 2020, arrimaha dhaqaalaha iyo dhismaha ciidamada qalabka sida iyo qaabkii ay ugala wareegi lahaayene ammaanka.
Maanta waxaa lagu wadaa in shir guddoomiyeyaasha ka mid noqdo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaa loo dhaadhici-doonna isla xisaabtan inuu dhex maro Soomaliya iyo hey’adaha caalamiga ah sida: Qaramada Midoobey, midowga Yurub iyo Midowga Afrika.
Shirka, Xilliyada hore waxaa dhici-doona shir wasiirrada ah oo looga arrinsanayo haweenka, nabadda iyo amniga.
Waxaa kale dhici-doona waxaa loo yaqaano“Private public partnership” oo looga hadlo sida ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda iyo shirkadaha iyo hey’adaha gaarka ah.
Waxaa shirka sidoo kale ka hadli-doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Federica Maria Mogherini oo ah haweeney Talyaani ah taas oo wakiil iyo madaxweyne ku-xigeen ka ah midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo amniga.
Margot Elisabeth Wallström, waa haweeney kale, oo wasiirka arrimaha dibadda ka ah dalka Swden.
Rosemary Anne DiCarlo, waa haweeney 3aad, waxaa xogheyaha guud ee qaramada midoobey kala shaqeysaa arrimaha siyaasadda.
Smaїl Chergui, oo ah diblomaasi Aljeeriyaan ah oo ka socda midowga Afrika, nabadda iyo amniga.